Baanka Caalamiga ah ee Xisaabaadka iyo Bangiga Caalamiga ah
Macluumaadka Bangiga Caalamiga ah
Xisaabta Bangiga Caalamiga ahi waa koonto bangi ku taal waddan aan ahayn kan aad dhalashada ku tahay. Bangiyada caalamiga, ama a akoonka bangiga, caadi ahaan waxaa loola jeedaa akoonnada laga furay meelaha dhaqaalaha sida mid ka mid ah jasiiradaha Caribbean, Cyprus, Luxembourg ama Switzerland. Ereyga badda asal ahaan ka soo jeedo Boqortooyada Ingiriiska oo markii hore loo gudbiyey bankiyo aan ku jirin halkaas. Sida ku xusan qaamuuska Merriam-Webster, bannaanka waxaa loola jeedaa "ku yaal ama ka howl gala waddan shisheeye."
Laga yaabee in alla inta boqolkiiba 50 ee caalimka adduunka ay ku qulqulayaan bangiyo shisheeye. Xukummada bangiyadaani waxay bixiyaan asturnaan gaar ah, sharci ilaalin xoog leh iyo helitaan caalami ah oo dhigaalkaaga. Dadku badanaa waxay u adeegsadaan bankiyo caalami ah sidii ay uga ilaalin lahaayeen hanti kadhaca dacwadaha, marka lagu daro aaminaada bada ama shirkad.
Furitaanka Bangiga Xisaabaadka
Furitaanka akoon bangi caalami ah aad uma badna marka loo eego furitaanka akoonkaaga. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad keento dhokumentiyo kale oo dheeri ah. Waxaad siisaa macluumaadkaaga shakhsiga ah iyo aqoonsi, tixraac ama laba iyo debaajigaaga furitaanka. Markaad furato koonto bangi dibedda, bangiyada guud ahaan waxay u baahan yihiin nuqul nootaayo ah oo baasaboor ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u baahan doontaa caddeyn degenaansho, sida biilasha adeegga, oo ay ku jiraan dhowr waxyaabood oo kale. Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad siiso waxay kuxiran yihiin shuruudaha hay'adda iyo qawaaniinta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah.
Bangiga dibedda wuxuu ka codsan karaa dukumintiga tixraaca baankaaga hadda jira. Haddii aad horay ugu leedahay koonto bangi kale, bangiga caalamiga ah wuxuu kuu arkaa inaad ka yar tahay halista. Shuruudan ayaa guud ahaan lagu qanciyey iyadoo la soosaarayo warqad tixraac oo ka socota bangiga aad hadda isticmaaleyso.
Duruufaha qaarkood, bangiga dibedda ayaa laga yaabaa inuu rabo inuu xaqiijiyo halka ay ka soo baxaan xisaabta. Waxay eegi karaan nooca macaamil ganacsi ee aad fileyso inaad shaqeyso. Tan waxaa loogu talagalay ilaalinta bangiga. Sababta ayaa ah in bangiyadaha dibedda ay ku jiraan cadaadis aad u sareeya si loo hubiyo inaysan ku lug yeelan howlaha sharci darrada ah. Haddii kale, waxay halis ugu jiraan la kulanka ganaaxyada ama luminta liisanka bangigooda.
Caddaynta Ilaha Sayniska
Haddii aad shaqeyso, jeegga mushaharku waa inuu ku qanco xaqiijinta sanduuqa. Lacagta ka soo gasha dhismaha ama macaamil ganacsi ayaa u baahan kara caddeyn asal ah iyada oo loo marayo qandaraasyo, dukumiinti xiritaanka iyo wixii la mid ah. Waraaq ka socota shirkadda caymiska waa inay ku filnaato markay lacag ku uruurineyso heshiiska caymiska. Haddii lacagta la dhaxlo, qofka fuliya ama maamulaha shaqsiyeed ee guriga ayaa warqad u diri kara bangiga. Bangiga dibedda wuxuu weydiin karaa dakhligaaga maal gashiga iyo halka maalgashigaagu ku yaal.
Faa'iidada haysashada shirkad ka shaqeysa shirkada 'Offshore Company' waxay tahay in aan mutacalimiin uqalmi karno. Markaa, waxaan kuu abuuri karnaa koontadaada maamullo badan oo adigoon u baahnayn inaad u safarto dibedda.
Talooyinka Bankiga Dhexe iyo Faa'iidooyinka
Markii aad bangi caalami ah ka faa iideysatid faa iidooyin kala duwan oo ah awoodaha shisheeye. Wadamada qaarkood bangiga badda Qarsoodiga si aad ah ayaa loo qaataa, bixinta macluumaadka kooxaha aan ruqsad laheyn waa dembi shaqaalaha shaqaalaha bangiga. Koontada bangiga ee caalamiga ahi waxay noqon kartaa aalad sir ah oo weyn. Si kor loogu qaado asturnaantaada maaliyadeed, waxaad ku furaysaa akoonka bangiga magaca shirkadda dibedda ku taal.
Macaashka canshuurta ee aad jeceshahay waxay ku xiran tahay waddankaaga. Dadka Mareykanka, tusaale ahaan, waa canshuur dakhliga adduunka. Boqortooyada Ingiriiska, Kanada iyo Australia waxay canshuuraan deggeneheeda iyadoon loo eegeyn goobta akoonku leeyahay. Marka waa muhiim in la raaco shuruucda oo la helo canshuurta iyo la talinta sharciga.
Sababta oo ah qarashyada hawlgalku badanaa way hooseeyaan, bangiyadaha dibedda ayaa badiyaa bixiya dulsaar ka sareeya bangiyada guryaha. Bangiyadaha dibedda ka ah waxay ku deeqi karaan nabadgelyo haddii aad ku nooshahay waddan leh lacag aan degganayn ama jawi siyaasadeed. Haddii tani ay adiga tahay, inaad ku shubto lacagahaaga xeebta waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo maalgashigaaga. Miyaad ka walaacsan tahay garsoore maxalli ah oo xayiraya xisaabaadkaaga bangiga? Taasi badanaa waa mid aad u adag in la sameeyo markii lacagtaadu lagu hayo bangi dibadeed.
Dad badani waxay saaxiibo iyo qaraabo ku leeyihiin waddamo shisheeye. Akoonnada dibedda laga helo sidoo kale waa meelo wanaagsan oo lacag lagu xareeyo haddii aad rabto inaad lacag u dirto iyaga. Malaha qof aad jeceshahay oo ku nool wadan kale wuxuu kaa tegey dhaxal. Hadday sidaas tahay, xisaab ka furashada waddankaas ayaa ah habka ugu fudud ee lagu heli karo lacagtaada. Miyaad safar balaadhan ugu safartaa meelo cayiman oo dibada ah? Waxaa laga yaabaa inaad iska ilaaliso inaad lacag aad u badan safarka ku soo qaadatid. Sidaas oo kale, waxaad door bidaa koonto bangi shisheeye.
Maxay u furantahay Account Offshore?
Xisaabaadka bangiyada caalamiga ah ee ay qabtaan shirkadaha shisheeye iyo / ama aaminaaduhu waxay ku bixiyaan inta badan ilaalinta hantida qofka. Markii maxkamadaha maxalliga ahi ay dhahaan “wareeji lacagta”, milkiilaha dekeda dibedda ayaa diidi kara inuu u hoggaansamo. Taasi waa sababta xisaabta bangiga caalamiga ah ee leh aaminaada ilaalinta hantida shisheeye ay tahay isku darka ugu awoodda badan.
Banka ku yaal meel ka baxsan xeebta ayaa waliba ah waddo wanaagsan oo lagaga wada qaybqaato fursadaha maalgashi ee caalamiga ah. Ururkani wuxuu ka furaa akoonnada bangiga dhammaan xukumadaha waaweyn ee caalamiga ah wuxuuna u dhaqmaa sida uqalmee si ay u noqoto bangiyada ugu xooggan Switzerland.
Mid ka mid ah doodaha ugu adag ee lagu aasaasay koontada bangi ee dibedda waa kala-qaybin. Dekadda oo si wanaagsan u wareegsan ayaa had iyo jeer ka kooban saamiyo, dammaanad, hanti ma guurto ah, biro qaali ah iyo wixii la mid ah. Taasi waa, kala duwanaanta hantida oo sii kordheysa micnaheedu waa kaliya in aad lacagtaada geliso fasallo kala duwan oo hanti ah. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay isugeyn juqraafi juquraafi ahaan iyo juquraafi ahaan, oo aad ku gaari karto koonto bangi dibadeed. Maskaxda ku hay deynta hadda ee Mareykanka ee hadda taagan marwalba sarreysa, oo kor u kacaysa $ 22 tiriliyan sida qoraalkan ah. Tirooyinkaasi waxay ka dhigan yihiin xitaa Maraykanka inuu nugul yahay. Boqortooyada Midowday (UK) waa deyn dhan $ 2.2 trillion ($ 8 trillion). Faransiiska iyo Jarmalka ayaa in ka badan € 4.5 tiriliyan ($ 5 tiriliyan) deyn ku leeyahay.
Markaa, inaad lacag ku haysato meel ka baxsan waa waddo aad naftaada ku hesho badbaado dhaqaale oo weyn. Haddii dhaqaalihii wadankaaga uu hoos u dhigo godka bakaylaha ee deynta, ma dooneysid inay iyagu ku qaataan. Marka, haddii aad lacag ku haysato gobollada ka aamin ah markii burburka dhaqaaluhu uu udhacdo qoyska dhexdiisa, waxaad noqon doontaa qaab aad uga fiican kuwa deriskaaga ah. Ka dib oo dhan, Mareykanka wuxuu hoos u dhigay heerka Standard & Saboolnimada sababtoo ah deynta xad-dhaafka ah. Waxaa jira kaliya 16 S&P AAA wadamada adduunka lagu qiimeeyay. Mareykanku midkood ma ahan.
Si ka duwan xisaabaadka Mareykanka, bangiga dibedda ayaa kuu oggolaanaya inaad kala doorato lacagaha kaladuwan ee aad ku haysan karto lacagahaaga. Maal-gashadeyaal fara badan ayaa doorbida inay hanti ku qabtaan lacago kala duwan. Natiijo ahaan, saameyntooda kuma yaraanayaan haddii awoodda wax iibsiga ee dollar uu hoos u dhaco.
Si kastaba ha noqotee, inkastoo ay jiraan faa'iidooyin badan oo lagu kala doorto lacagaha kala duwan, waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin. Waxaad ku dhammaysan kartaa canshuur shisheeye ah oo dulsaar ah. Haddii waddanka aad lacagta ku maalgelisay waayo-aragnimadii dhaqaale, sicir-dhimis lacageed ayaa suurtagal ah. Taasi macnaheedu waa qiimaha hantida ee xisaabtaada bangiga ayaa dhici karta. Mar walba waxaa suurtogal ah in isbeddel lagu sameeyo waddanka, iyo dib u soo celinta bangiyada.
Tan dambe lagama yaabo dalalka badankood. Maskaxda ku hay in dalal badan aysan lahayn xoogga internetka ee internetka. Marka, fursadaha helitaanka xatooyada aqoonsiga ama dambiyada la midka ah ee internetka ayaa waxyar kordha. Intaas waxaa sii dheer, dalal badan ayaan haysan sharciyo la mid ah ilaalinta macaamiisha sida Mareykanka. Baadhitaan ku samee shuruucda ilaalinta macaamilka ee ummad intaadan furanin koonto bangi. Si ka sii wanaagsan, la xiriir urur khibrad u leh furitaanka akoonno dibadeed. Ururkayagu waa kan ugu weyn adduunka oo dhan oo ku saabsan caawinta dadka u baahan akoonnada bangiyada caalamiga ah.
Beddelista hal lacag oo loo beddelo mid kale waxay badiyaa ku lug yeelan kartaa ujrooyinka sarrifka. Khidmadaha is-weydaarsigu waxay wali qayb ka yihiin isbedelka lacagta. Taasi waa sababta inta badan dadka ku celceliya ganacsiga maalgashiga maalgashi ahaan sida istiraatiijiyad maal gashi ay badanaa lumiyaan.
Ka hel Caawin Xirfadle
Marka, sababaha kor ku xusan waxay si xoogan u taageersan yihiin sababta ay muhiimka u tahay in la helo caawimaad xirfad-yaqaanimo markii la furayo koonto bangi oo ka baxsan. Xirfadlayaasheena ayaa garanaya bangiyada si wanaagsan ula dhaqmay macaamiisheena. Waan ognahay bangiga u furayo xisaabaadka dadka ku nool wadankaaga. Intaa waxaa dheer, amniga bangigu waa rabitaan xoog leh macaamiisheena. Marka, waxaan si joogto ah u baartaa isku xirnaanta bangiyada ka hor intaanan ku talin. Sidaas oo ay tahay, haddana bankiyada oo dhami kuma eka inay dhaqaale ahaan u liiteen. Sidaasoo kale, waxaa jira lambarro kor ku xusan oo aad ugala hadli karto baahiyahaaga xirfadle. Bedel ahaan, waxaad ku buuxin kartaa foomka wadatashiga bilaashka ah ee boggan.
Waxaad ku maalgelin kartaa koontadaada bangi ee dibedda adiga oo diritaanka xisaab xawaare ah ugu dirtay koontada bangiga ee gurigaaga mid ka baxsan. Waxaa jira hal tixgelin yar oo ku saabsan wareejintaan markii loo sameeyay bangi dibadeed, taasna waxay quseyneysaa khidmadaha. Si ka duwan wareejinta xawaaladaha ee laga sameeyo bangiyada gudaha, xawaaladaha caalamiga ah ee mararka qaarkood ku lug leh khidmadaha ayaa laga qaadayaa macaamilka bal in maalgelin la soo diray iyo in kale. Ma jiro lacag ujro ah, sidaa daraadeed macaamiisha bangiyada caalamiga ah ee suuragalka ah waa inay raadiyaan hey'ado soo bandhiga heshiisyada ugu fiican. Gaar ahaan, bangiyadaha dibedda ku shaqeeya ayaa sida caadiga ah aan u isticmaalin jeegag (jeeg). Marka, xulashooyinka ugu wanaagsan waa wareejinta silig.
Lacag aruurinta akoonadaada dibedda guud ahaan waa ka sahlan tahay. Tan waxaa ugu wacan bangigaagu waa inuu ku siiyo ATM ama kaarka debit. Qaabkaas, lacagtaada si fudud ayaa looga heli karaa adduunka oo dhan. Hadda, macaamiladan ayaa sidoo kale laga qaadayaa ajuuro macquul ah. Marar dhif ah, bangi dibadeed ayaa ku deeqi doona jeegag, laakiin tani maahan hab ku habboon oo lacag looga soo qaado macaamiisha badan. Markay dhacdo in bangi dibedda laga soo hubiyo macmiilka, sirta ayaa hoos u dhacda. Sidoo kale way adagtahay in lacag laga qaado jeeg laga soo qaatay bangi shisheeye dalka gudihiisa. Intaa waxaa sii dheer, lacag ku bixinta jeegga noocan oo kale ah waxay u baahan kartaa waqti dheer oo sugitaan.
Beddelka ugu wanaagsan waa in la isticmaalo laba akoon, bangiga gudaha iyo dibedda, siday u kala horreeyaan. Adigoo adeegsanaya xawilaadaha taleefanka, waxaad lacag uga diri kartaa akoonkaaga dibedda ee bankigaaga. Marka helitaanka lacagahaaga maahan dhibaato. Waxaad wali ku raaxeysataa asturnaanta ay bixiyaan koontadaada bangi ee dibadda adiga oo ka faa'ideysanaya fududeynta bangiga gudaha.
Markii aad sameyneyso baaristaada akoonnada bangi ee dibedda, tixgeli canshuuraha gudaha tixgelin. Baananka shisheeyaha badankood ee aan isticmaalno ayaan canshuur maxalli ah ku soo rogin koontooyinka shisheeye, halka kuwo kalena ay ku xiraan. Tusaale ahaan, haddii aad akoon ku leedahay Switzerland lacag doolarka Mareykanka wax canshuur ah kuma jiraan Switzerland. Haddii qof koonto ku leeyahay Swiss Franc, xisaabiyuhu wuxuu bixiyaa canshuurta Switzerland macaashkaas.
Marka, taasi micnaheedu waxaa weeye inaad ku dhamaanayso cashuur bixinta wadankaaga kaliya, laakiin wadanka aad bankiga ku leedahay. Caadi ahaan, waxaad ka goysaa canshuuraha ajnabiga ee biilkaaga canshuurta ee guriga, sidaa darteed saameyntu badanaa waa dhexdhexaad.
Xisaabta bangiga caalamiga ahi waa mid ka jirta qaran ka baxsan xuduudaha wadankaaga. Marka lagu daro kalsooni ilaalinta hantida badaha waa mid ka mid ah qaababka ugufiican ee lagu ilaaliyo waxa aad adigu leedahay. Bangiyadaha dibedda ka shaqeeya waxay ilaashadaan liisamadooda iyagoo raacaya qawaaniinta u-baahan macaamiisha-sharci-yaqaanka ah. Tani macnaheedu waa inaad keentaa dukumiinti sharci ah oo codsiyada bangigu kaa codsanayo.
Adeegsiga lacagaha ku jira koontadaada dibedda waxay la mid tahay fududeynta kaarka deynta. Diritaanka iyo ka helitaanka lacagaha akoonkaaga bankiga caalamiga ah waxay la mid tahay fududeynta sameynta wareejinta wicitaanka.
Ma rabtaa inaad furato xisaab bangi oo ka baxsan badda? Haddii ay sidaas tahay, fadlan isticmaal lambarrada taleefannada kor ku yaal. Waxaad buuxin kartaa foom ku yaal boggan wixii macluumaad dheeri ah sidoo kale, saacadaha 24 maalin kasta.
<Illaa cutubka 2
Ilaa cutubka 4>